Iindaba - Umsitho wokuwonga abasebenzi ababalaseleyo ngoJan 27th, 2021
Umsitho wokuwonga abasebenzi ababalaseleyo ngoJan 27th, 2021
Umsitho wokuwongwa kwabasebenzi ababalaseleyo ngo-2020 ububanjwe ngenjikalanga izolo ePerfect Display. Ukuchaphazeleka ngumtshangatshangiso wesibini we-COVID-19. Bonke oogxa bahlanganisene eluphahleni nge-15F ukuba bathathe inxaxheba kumsitho wamabhaso wonyaka wabasebenzi ababalaseleyo. Intlanganiso ibikhokelwa nguChen Fang weziko lolawulo.
Uye wathi, kunyaka obalaseleyo ka-2020, bonke oogxa bethu boyisile ubunzima kwaye benza impumelelo eyonwabisayo, ebekwe kwiinzame zokudibana zabo bonke abantu esisebenza nabo. Abasebenzi banamhlanje ababalaseleyo ngabameli nje. Banempawu ezifanayo: bawujonga umsebenzi njengemishini yabo kwaye balandela ukugqwesa. Nokuba bakwimisebenzi yesiqhelo, bafuna ngokwabo imigangatho ephezulu. Baxhalabile malunga nenkampani, bazinikele kwaye bazimisele ukufaka isandla.
U-Chen Fang wakhankanya: abasebenzi abafake igalelo cwaka bangumqolo kuphuhliso lweshishini; Oovulindlela bokuyila izinto kunye nophuhliso, bavula iimarike zaphesheya, bakhokele umkhwa, kwaye bawenze uthandwe kwihlabathi liphela; Ubunkokeli bomzabalazo onzima, balawula ngokukuko, kwaye bonyusa ingeniso kwaye banciphisa inkcitho.
Ekupheleni kwentlanganiso, uSihlalo uMnu. Wenza intetho yokuqukumbela:
1. Abasebenzi abagqwesileyo ngummeli weqela lethu elihle.
2. Cwangcisa ithagethi yokuthengisa kunye nemveliso ngo-2021, kwaye inkampani iya kuthi gqolo ukugcina izinga lokukhula lonyaka malunga neepesenti ezingama-50. Biza bonke abasebenzi ukuba baqhubeke nokusebenza nzima.
3. Landela ubizo lukarhulumente, khuthaza ukuba ungabuyeli umzi wakowabo kunyaka omtsha ngaphandle kokuba kukho imfuneko. Inkampani iya kunika i-500 yuan koogxa abahlala eShenzhen, kwaye bachithe unyaka omtsha owahlukileyo kunye nabo.